Bolivia: Diaben’ireo Vahoaka Indizeny Voaporitry Ny Polisy Ao Yucumo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Desambra 2017 16:08 GMT
Efa ho iray volana izay no nanombohan'ny andiany iray mpanao hetsipanoherana, izay avy amin'ny vahoaka indizeny ao amin'ny faritra teratany sy ny valan-javaboaharin'i Isiboro Sécure (fanafohezana amin'ny teny Espaniola: TIPNIS), ny diabeny nandia 500km mba ho tody any amin'ny foiben-toeran'ny governemant ao La Paz ary haneho ny fanoherany ny fanamboarana arabe migodàna hamakivaky ny faritaniny. Nandritra ny andro maromaro, nosakanan'ny vondrona mpanjanaka mpomba ny governemanta izay nanakana ny lalana tao Yucumo mba hanerena ireo mpanao fihetsiketsehana mba hiato ka hamerina ny fifampiresahana amin'ny governemantan'i Evo Morales.
Nanamafy ity sakana ity ihany koa ny polisy tamin'ny filazana fa te-hisoroka fifanandrinana eo amin'ireo mpanao diabe sy ireo mibahana ny làlana izy ireo. Nahatonga ny mpanao fihetsiketsehana tsy hanana famatsiana io sakana io, izany hoe sakafo, rano ary fanafody, izay omen'ireo mponina an'arivony tao an-tanàna. Niakatra foana ny fihenjanana teo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Nazava be fa tsy ela dia tsy maintsy nilaina ny fidiran'ny mpitandro ny filaminana.
Fotoana vitsy taorian'ny 5 ora hariva, ora ao an-toerana, ny 25 septambra, tamin'ny fotoana nihinanan'ireo mpanao fihetsiketsehana sakafo, nanomboka nitifitra entona mandatsa-dranomaso ireo polisy nanao fanamiana, niisa 500 teo ho eo, hanaparitahana azy ireo sy mba hanambatra azy ireo ho anatin'ireo fiarabe fitaterana.
Niblaogy ara-potoana momba ny vaovao voalohany azon'ny ekipany ara-pifandraisana teny an-toerana ny Fikambanana Tierra.
17:18 ENTONA Vao nanomboka ny famafazana entona an'ireo teratany ny polisy tao amin'ny toby nisy azy ireo hatry ny omaly.
17:25 TOERAN-PITODIANA: : LA PAZ. misy mitatitra aty aminay fa manery ny vehivavy sy ireo zanany hiakatra ao anaty kamiao handeha ho an'ny Yucumo ny polisy.
17:28 FAHAKIVIANA Ao anatin'ny fahakiviana, mitomany ny zaza maro ary miezaka ny tsy ho tafasaraka amin'izy ireo ny reniny raha ireo polisy mpandrava korontana kosa miditra ao amin'ny toby mba handroaka ireo mpanao diabe ary manery azy ireo hiditra ao anaty kamiao avy any San Borja.
17:49 ETY AN-TOERANA IZAHAY. Ho ataonay izay rehetra vitanay mba hampitàna vaovao aminareo tsikelikely fa tokony ho tonga saina ianareo fa tsy moramora izany ary tsy afaka tanterahana ny fifandraisana raha tsy mifanelanelana.
Fotoana vitsy taty aoriana, nanafika ny polisy, nanomboka notaterin'ireo media bolivianina teny an-toerana ny vaovao, na dia toa nalain'ny polisy teny amin'ireo mpanao gazety aza ny fakantsariny sy ny findainy. Nisy tatitra mifandimpatra momba ny isan'ireo maty sy maratra, saingy nilaza ny fasntom-pahitalavitra Red Uno, fa zaza 3 taona no maty, toa sempotr'ilay entona mandatsa-dranomaso nampiasain'ny polisy.
Nanamarika ny sampan-draharaha an-gazetin'ny Erbol fa farafahakeliny olona 45 no notsaboina tany amin'ny hopitalin'ny faritra, ary hoe nilaza ny talen'ny hopitalin'ny San Borja, Javier Jiménez, fa nofatoran'ny polisy ny tanan'ireo dokotera ary nosakanan ry zareo tsy hitsabo ireo mpanao diabe naratra.
Nandray ny fijoroana vavolombelon'ilay vehivavy mpisolotena ny vahoaka boliviana indizeny, Esther Argollo, teo amin'ilay fotoana nisian'ny firotsahan'ny polisy, ny blaogy ”TIPNIS Résister”. Izao no nolazainy :
Nisy vehivavy iray niaraka tamin'ny zazakely telo ary nitomany teny an-dalàna, nomeny ahy ireo zaza ary niteny izy : azafady indrindra, azafady indrindra, ny zanako, ny zanako. Tsy maintsy aho nanampy zazakely telo taona izay nitomany sy naratra teo amin'ny tarehiny angamba satria nianjera. Nitsoaka nankany anaty ala izahay satria nandefa entona tent rehetra teny ny polisy, tsy nanaja na iza na iza, nihodidina ny toby, nanipitsipy ny entana, nanafika ny olona, nisy marina mantsy ireo voadaroka.
… Tena be dia be ny zaza very, nitady azy ireo daholo ny reniny. Tsy fantatra hoe firy ny olona mbola any anaty ala satria nihazakazaka izy ireo noho ny tahotra. Nihazakazaka niboridana, tsy nisy na inona na inona izy ireo […] Maratra daholo ny rehetra, misy ny reniny very zanaka ary tsy mahafantatra ny misy azy ireo, zaza very, alina ny andro ary tsy misy ny vaovao mikasika azy ireny, very izy ireo, miparitaka any rehetra any.